Ny LinkedIn Campaign Manager dia namoaka ny zava-niainany farany tamin'ny fanentanana tamin'ny fampielezan-kevitra | Martech Zone
LinkedIn Camp Manager Manager namoaka ny zava-niainany vao haingana fanaovana tatitra momba ny fampielezan-kevitra
Alakamisy, Jolay 26, 2018 Alatsinainy, Jolay 23, 2018 Douglas Karr
LinkedIn dia manambara traikefa fanaovana tatitra nohavaozina indray Mpitantana fampielezan-kevitra LinkedIn, manamora ny fahazoana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ilay interface vaovao dia manome traikefa madio sy manintona hahafahanao mitantana sy manatsara ny fanentanana nataonao.
Ny fampiroboroboana ny Manager Campaign LinkedIn dia misy:
Mitsitsia fotoana amin'ny fanaovana tatitra momba ny fampielezan-kevitra - Amin'ity traikefa vaovao fanaovana tatitra ity dia ho hitanao haingana ny fomba fanatanterahan'ny fampielezankevitrao sy ny fanitsiana azy ireo hanatsara ny valiny. Ny data ao amin'ny Campaign Manager izao dia mavesatra 20 isan-jato haingana kokoa, ahafahanao mamaky tahiry amin'ny fomba mahomby kokoa - na dia manana fampielezan-kevitra an-jatony sy famoronana doka aza ianao. Ary koa, rafitra vaovao nab iray ahafahanao mifamadika avy amin'ny kaonty mankany amin'ny fanentanana mankany amin'ny doka amin'ny tsindry roa. Nohavaozainay ihany koa ny fahafaha-mikaroka, ka segondra vitsy monja no mila fangatahana fanentanana manokana amin'ny anaran'ny fampielezan-kevitra, ID fanentanana, endrika doka ary maro hafa.
Fantaro ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra ary manatsara amin'ny indray mipy - Rehefa tsy mandeha tsara ny doka ataonao dia mila mihetsika haingana ianao mba hanitsiana azy. Izany no antony nanampianay fiasa vaovao hanampy anao handray fanapahan-kevitra haingana kokoa noho ny taloha. Ny traikefa vaovao momba ny fanaovana tatitra dia misy fihenam-bidy 1-tsindry manome anao fahitana lalina kokoa momba ireo tondro manan-danja toy ny fisehoan'ny fiovam-po sy ny fametrahana ao amin'ny Tambajotra Mpihaino LinkedIn.
Ataovy manokana ny traikefanao amin'ny fanaovana tatitra - Azonao atao izao ny misafidy sy misafidy ny fandrefesana ny metrika izay tena tianao indrindra, na ny Performance, ny Conversions na ny Video.
Araka ny voalazan'ny LinkedIn, ity famotsorana ity dia dingana voalohany amin'ny drafitry ny vokatra maharitra.
Mandrosoa doka LinkedIn
Tags: tatitra momba ny dokadoka mifandraydokam-barotra linkintalen'ny fampielezan-kevitra